1. Igwefoto 360 Ultimate
Nwere ike ikwu kpakpando: 4.5
Nkowasi: Igwefoto 360 bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu igwefoto ngwa maka smart igwe. The ngwa na-eweta ma ọkachamara larịị ntuziaka njikwa na atụmatụ tinyere fun edezi atụmatụ. Ọ na-abịa dị iche iche na igwefoto ụdịdị, nza nke nanị nzacha, free ígwé ojii album, nkekọrịta atụmatụ, ọkachamara edezi ngwaọrụ na ndị ọzọ.
Extra downloadable ngwugwu, mmetụta na Mpaghara
Massive nhọrọ nke mmetụta
Aka iji atụmatụ
Igwefoto ngwa mgbe ụfọdụ amanye closes
Enwereghị edezi atụmatụ dị ka cropping, red-anya mwepụ wdg
Enweghị ike iji Njikwa foto
Nkowasi: Cymera bụ ihe ọzọ na-ewu ewu android foto na ngwa na-dị na Google Play Store. Tinyere ike igwefoto atụmatụ, ngwa na-ewetakwara ton edezi atụmatụ. Igwefoto interface nke Cymera agụnye a ọnụ ọgụgụ nke dị ike anya m dị ka Focus, Anti-shake, convex na ndị ọzọ.
Họrọ si a nnukwu nhọrọ nke edezi atụmatụ
Mepụta foto Portraits
Ịkọrọ gị collages site mmadụ mgbasa ozi na email
The ngwa nwere ike na-eche a bit mgbagwoju anya dị ka ego nke atụmatụ weighs ya ala a bit
Ụfọdụ ọrụ na-enwe kwụsie ike mbipụta
System: Android na iOS
Nwere ike ikwu kpakpando: 4.3
Nkowasi: Retrica ga-ịgbanwe foto gị na ahụmahụ n'ime ihe kwesịrị ncheta n'ezie. Ị nwere ike ịhọrọ otú ị chọrọ icheta na oké ele si gị na njem, ma ọ bụ na-atọ ụtọ nri ị na-akọrọ enyi. Na Retrica si ndụ nzacha, ị nwere ike ihuchalu otú foto gị ga-ele anya, ọbụna tupu ị na-foto. Ọ na-abịa na trendy logos mee ka gị na photos ọzọ kwesiri ngosi. Na, na ihe karịrị 100 nzacha, ị gaghị agba ọsọ nke nhọrọ.
Ọtụtụ ezigbo oge nzacha
4. zuru okè 365
Nwere ike ikwu kpakpando: 4
Nkọwa - zuru okè 365 ị nwere ike mfe welie Portraits. Ọ na-abịa ihe karịrị 20 dị ike ịma mma ngwaọrụ-ekwe ka ị hazie gị pịrị foto na ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ihe ndị na ị nwere ike ime na ya na-- imagide blemishes, ihichapu anya okirikiri, brighten akpụkpọ anya na nro na odidi dị ka mkpa.
Mee na iri na abuo Hot Nye maka nzi mma etemeete mmetụta na otu aka
Get nzi atụ nke dị iche iche n'ụdị nke etemeete enweghị etinye a otutu oge ma ọ bụ ego
Miri granular njikwa maka Skin, Face, anya na n'Ọnụ
Nnọọ ezi na-adaba adaba ihu nsuso ihe
Anaghị zọpụta ọrụ ahụ na-enwe ọganihu dị ka a na-arụ ọrụ ngo, kama ị pụrụ nanị izoputa dechara foto
Ị ga-Redo mmetụta kwesịrị na ị chọrọ ịlaghachi ya
Efu mma ka tweak nku anya
Nkowasi: PicShop Photo Editor bụ a adịchaghị foto edezi ngwá ọrụ kit na a dịgasị iche iche nke atụmatụ; si nzacha na mmetụta ka okpụhọde Tweaks na meme ọgbọ arụmọrụ, ọ bụ a dị ike ngwá ọrụ na ihe dị oké mkpa ngwa n'ihi na ndị na-ha Android foto kpọrọ ihe.
Ọmarịcha na customizable ọrụ interface
Rammed na oké ọrụ na atụmatụ
Mfe iji na oké nkuzi
Nwere ike ikwu kpakpando: 4.9
Nkowasi: Snaptastic bụ a mara mma ma dị ike foto edezi na ngwá ọrụ gị android ngwaọrụ. Featuring tupu set nzacha na a nso nke ntuziaka customizations, ọ na-enye a ikpo okwu maka ụfọdụ zuru ezu na nnukwu foto nkwalite ya.
Pụtara onye ọrụ interface
Nza nke customization nhọrọ, ma tupu set na ntuziaka
Na-arụ ọrụ ma na Eserese ma ọ bụ odida obodo mode
Ọ bụghị ndị dị ọnụ ala ngwa si n'ebe Otú ọ dị n'ebe freebie version dị na nta atụmatụ
Nkowasi: FunCam bụ a jụụ na mfe na-eji igwefoto ngwa na-enye ụfọdụ oké achọ nzacha nke ị nwere ike ele na ozugbo. Yiri ewu ewu ngwa ọdịnala na anyị na enyocha tupu, FunCam bụ a mma n'anya ngwọta liven gị foto.
Nice nso nke nzacha na ị nwere ike ịlele si na ezigbo oge site na gị na-ekiri
Ka ị na-etinye ndị a nzacha na foto ugbua na gị gallery
Dịkwuo / ibelata larịị nke mmetụta
Image mkpebi naanị ruo 3MP
Ọ dịghị ad-free version iji pụọ na
Ọ dịghị video nkwado
Nkowasi: Na Instagram, ọ dị mfe na-a snap, tinye a nyo na bulite ya. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na ukwuu n'ihi na-ekere òkè ukporo foto. The nzacha na-ito eto na-amu amu mobile photographer na ọ bụ mfe iji.
Nice set nke nzacha na-eme ka gị foto kpam kpam
Dị mfe iji foto nkekọrịta na nchọpụta elekọta
Nnọọ ngwa ngwa na anabata
Ọtụtụ nde ndị ọrụ
Enwereghị multiple nhọrọ nke mmetụta
Naa nzacha karịa ọtụtụ ndị ọzọ na Android ngwa
Adịghị arụ ọrụ na ụfọdụ ngwaọrụ, adịghị n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-akwado ndị ọzọ
Ebe igwefoto adịghị arụ ọrụ, ọ ga-ekwe ka ị bulite si gị SD kaadị
Obere oke nke ókè-ala-, ọ bụghị ọtụtụ mmetụta, ọ dịghị tilt nnofega ma ọ bụ edezi ngwaọrụ
Enwereghị iOS atụmatụ, dị ka ezigbo oge nzacha atop nke igwefoto
9. Pixel igwekota
Nkowasi: Pixel igwekota bụ a ọmarịcha foto edezi ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe tweaking foto n'ime a nkwafu ọrụ interface, nke a bụ ezigbo maka unu, mgbe ọ bụghị a elekọta mmadụ na netwọk, dị ka Instagram.
30 nzacha, 24 film n'ígwé na 16 okpokolo agba
Mee multiple mmetụta n'otu oge
Zọpụta ọkacha mmasị gị n'ịgwa
l Mfe ịkọrọ gị aka ọrụ
Cons: Enwereghị raara edezi atụmatụ: cropping, tilt-nnofega wdg
10. DSLR Igwefoto Pro
Nkowasi: The DSLR Igwefoto Pro bụ ihe ngwa n'ihi na gam akporo ọrụ achọ a zuru on ọkachamara igwefoto ngwa. The ngwa e mepụtara site GD Software, onye nwekwara ndị otu n'azụ ọzọ ọma ngwa, akwụkwọ ntuziaka Igwefoto. The DSLR Igwefoto Pro ngwa nwere ụfọdụ n'ezie dị ike atụmatụ juru n'ọnụ ke a ọma interface.
Ezi na-achọ GUI
Ọtụtụ igwefoto ọrụ
Top 5 Samsung Video Players Ị-amarakwa
Otú nyefee Data si gị Blackberry ka a HTC ekwentị
Otú nyefee ngwa Android 4.4, KitKat
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si HTC One X / S / V
Olee otú Record Rdio Music ka Google Music Library
LG Data Recovery: Olee naghachi Data si LG laptọọpụ
> Resource> Android> 10 Best Igwefoto ngwa ọdịnala n'ihi Android